Rubber | Myanmar Seed Information Portal
Home » Protocol » Rubber
Experiment and Distinct Characteristics
1. Crop Name - Rubber
2. Experiment Size - 0.23 ac/ Variety
Spacing-20 ft x 10 ft (50 plts in one experiment)
- Depend on testing variets
3. Experiment Design - RCB Design
4. Replication - 4-5 times depend on testing varieties
5. Check Variety - release varieties by NSC (depend on region) (PB 260, RRIM 600 & BPM 24)
6. Plant to record - According to number of testing variety အစေးလှီးသမား တစ်ယောက်၏ လုပ်ကွက်တစ်ကွက်စာ depend on 350-400 plants
(a) ထပ်ပြုကြိမ် (၄) ခုစလုံးတွင်အစေးလှီး လုပ်သားတစ်ဦးလှီးနိုင်စေ ရန်ကာမိသောအပင် အရေအတွက် (သို့)
(b) ထပ်ပြုကြိမ် (၁) ခုတည်းတွင်အစေးလှီး လုပ်သားတစ်ဦး လှီးနိုင်စေရန်ကာမိသော အပင်အရေအတွက်
7. Plant type - ၂ဖုံရင့်အဖူးကူးပင်
8. Region - 3-5 different regions
9. System of tapping - ½S d2 (အပင်လုံးပတ်တစ်ဝက်၊ ရက်ခြားလှီး)
- အစေးထွက်လှုံဆော်ဆေး မသုံးရပါ။
အခေါက်ကျနှုန်း - 1.5-1.7 mm/day
- 30 mm/month
tapping month (Day) - 8 months (110-115 Days)
- ၅၀လက်မအမြင့်တွင်လုံးပတ်၂၀သတ်မှတ်ခြင်းလက်မရှိသောအပင်များ၇၀%ရှိသည့် အချိန်
10. Fertilizer rate (a) Basal Fertilizer - Rock Phosphate4oz/pit
(b) in first year - early monsoon (11:18:4:3 mixed3oz /plt)
Late monsoon (11:18:4:3 mixed4oz /plt)
(c) in second year - early monsoon (11:18:4:3 mixed 8 oz /plt)
Late monsoon (11:18:4:3 mixed 10 oz /plt)
(d) in third + forth year - early monsoon (11:18:4:3 mixed 12 oz /plt)
11:18:4:3 (12 oz /plt) (Late monsoon)
(5) in fifth year - early monsoon (15:15:6:4 mixed 12 oz /plt)
Late monsoon (15:15:6:4 mixed 12 oz /plt)
(6) Later year after tapping - early monsoon (15:15:6:4 mixed 16 oz /plt)
Late monsoon (15:15:6:4 mixed 16 oz /plt) or
- early monsoon (15:7:18:2 mixed 16 oz /plt) Late monsoon (15:7:18:2 mixed 16 oz /plt)
11. Care and management (a) တောခုတ်ခြင်းနှင့် ၆ပေလိုင်းတန်း အပြောင်ရှင်းခြင်း-
Early monsoon - 1 time, Late monsoon- 1 time
(d) ကိုင်းပိုဖြတ်/ ကိုင်းထွက်စေရန် ပြုပြင် ခြင်း -
အပင်အမြင့်၉ပေအတွင်း ရွက်ဖုံ ၂-၃ ဖုံရှိ တိုင်း၎င်းအဖုံ အောက်ပိုင်းပင်စည်မှ ထွက်ရှိနေသည့် ကိုင်းပိုများကိုထိန်းချုပ်စနစ် (Control Pruning) ဖြင့်ဖြတ် ခြင်း၊ ၉ပေအမြင့်ကျော်သည်အထိ ကိုင်းဖြာခြင်းမရှိသောအပင်များတွင် ရွက်ဖုံရင့် ထိပ်ဆုံးအဖုံရှိ dormant bud ကိုထိုအဖုံ၏အရွက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း (သို့) ရင့်သော ထိပ်ဆုံးရွက်ဖုံ၏အလက်များကို အခြေမှကပ်၍ ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကိုင်းများ ထွက်စေရန် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း (Branch Induction)
(e) Filling to missing plant
Missing plant will fill on 1-2 years after sowing. It will do not the record.
(f) Prevention of pests and diseases
ကျရောက်သောပိုးမွှားရောဂါ အမျိုးအစားအလိုက် ထိရောက်သောနှိမ်နင်းမှု များဆောင်ရွက်ခြင်း
12. Data record (a) plant of one year – plant height, diameter and number of sheath.
(b) plant of two year and above - diameter
(c) အစေးလှီးပင် - လုံးပတ်အထွက်နှုန်းရော်ဘာအစေးသားအခြောက်ပါဝင်မှု
(d) disease resistant
(e) wind resistant
14. Cost of Experiment (a) Pre year – 335, 750/-
(b) Sowing year- 221,750/-
(c)6years of maintainance = Total Cost = 9,857,500
2.5 lakh x6yrs = 25
(d) အစေးလှီး 13 yrs = 78 lakh
1. Plants (one year)
(a) Plant height - မြေပြင်မှ(သို့) အဖူးဆက်သည့်နေရာမှရင့်နေ သောထိပ်ဆုံးရွက်ဖုံ၏ dormant bud အထိအမှတ်အသား မှတ်ထားသော တိုင်းတုတ်ဖြင့်တိုင်းပါမည်။ ဒီဇင်ဘာလ၌ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(b) Diameter - မြေပြင်မှ (သို့) အဖူးဆက်သည့်နေရာမှ၅၀စင်တီမီတာအမြင့်တွင်ပင်စည်၌ဆေးရစ်ပြီး Measuring tape ဖြင့်တိုင်းပါမည်။ဒီဇင်ဘာလ၌ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(c) Number of sheath - ရွက်ဖုံအရေအတွက်ကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ၌ပင်မှတ်တမ်းယူပါမည်။
2. Plants (two year and above)
၂နှစ်သားနှင့်နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်အပင်မှာမြင့်လွန်းသွားခြင်းကြောင့်အမြင့်မှတ်တမ်းမယူတော့ဘဲပင်စည်လုံးပတ်သာ မှတ်တမ်းယူပါသည်။မြေပြင်မှ (သို့) အဖူး ဆက်သည့်နေရာမှ၁၅၀စင်တီမီတာအမြင့်တွင်ပင်စည်၌ဆေးရစ်ပြီး Measuring tape ဖြင့်တိုင်းပါမည်။ဇွန်နှင့်ဒီဇင်ဘာလများ၌တစ်နှစ် (၂) ကြိမ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
3. Tapping plant
(a) Diameter - မြေပြင်မှ (သို့) အဖူးဆက်သည့်နေရာမှ၁၅၀စင်တီ မီတာအမြင့်တွင်ပင်စည်၌ဆေးရစ်ပြီး Measuring tape ဖြင့်တိုင်းပါမည်။ ဇွန်နှင့်ဒီဇင်ဘာလများ၌တစ်နှစ် (၂) ကြိမ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(b) Yield - တစ်ပင်ချင်းစီ၏ အစေးခံခွက်အလေးချိန် (g) ကို Digital balance ဖြင့်ကြိုတင်ချိန်ပြီး မှတ်တမ်း ယူမည်။ အစေးခံခွက်နှင့်အစေးရည်အလေးချိန် (g) ကိုချိန်ပြီးအစေးခံ ခွက်အလေးချိန် (g) ကိုနုတ်ပါက အစေးရည်အလေးချိန် (g/ tree/ tap) ကိုရမည်။အစေးရည်ကို၂% Formic acid ဖြင့်သမအောင်ရောမွှေပြီး ခဲကာညသိပ်ရေဖြင့် အက်ဆစ်ကုန်သည်ထိဆေးကြောပြီး smooth roller ဖြင့်ရော်ဘာပြားအထူ၂-၃မီလီမီတာ ခန့်ရအောင်ကြိတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် groove roller ဖြင့် (၁) ကြိမ်ကြိတ်ပါမည်။ အရိပ်တွင် (၁) လ လေသလပ်ပြီးအစေးပြား အခြောက်အလေးချိန်ကိုချိန်ပါမည်။ g/ tree/ tap ဖြင့်ဖော်ပြပါမည်။
(c) Content of dry latex (DRC %) - shall calculate the following formula.
DRC % = (weight of dry latex/ weight of latex) ၁၀၀
4. Disease Resisant
(a) (Phytophthora pot rot and leaf fall)
Disease score of Phytophathora leaf fall
0 = nill;
1 = leaf fall less than 10% of canopy
2 = leaf fall range between 10-25 of canopy
3 = leaf fall range between 26-50% of canopy
4 = leaf fall range between 51-75 % of canopy
5 = leaf fall greater than 75% of canopy
(a) အကိုင်းအခက်၊ အသီးပုပ်၊ အခေါက်ဆွေးများကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပါ။
(b) Shall sow the resistant varieties.
(c) Funguran 0.2%, Ridomil, Mencozeb – systematic- fungicide
(b) Powdery Mildew
Disease score of Powdery Mildew
0 - No disease
(a) ဆောင်းတွင်းအရွက်နုလဲချိန်- Stop the cut
(b) အရွက်သစ်ထွက်ချိန် - Don’t apply Nitrogen
(c) Kumulus10 g/4litre H2O / week
(d)Sulphur 1.2 g/ 1 litre H2Oနှင့် Bavistin5gm/ 1 litre H2O (alternative spray)
(a) Shall apply the fertilizer
(b) Water management in summer.
(c) Funguran (0.2%) 1 time/5days
(d) Dithane M 45 -2gm / lit (1 time/10/15 days)
(e) Bavistin2g/ lit Dithane M 45 and alternate.
(d) Colletotrichum secondary leaf fall
Disease score ofColletotrichum secondary leaf fall
0 no infected leaves
1 less than 10% of leaves infected
2 10-50% of leaves infected
3 More than 50% of leaves infected
(a) Fertilizer application
(b) Funguran (0.2%) 1 time/5 days
(c) Bavistin2g/ lit and Dithane M 45 (alternate)
(e) Corynespora leaf fall
Disease score ofCorynespora leaf fall
1 up to5spots (very light)
2 5-10 spots and 0-25% leaf fall (light)
3 > 10 spots and26-50% (Moderate)
4 Large lesion and51-75% leaf fall (Severe)
5 > 76 % leaf fall (Very severe)
(c) Dithane M 45 (2.5 g/lit), Thirum, Bavistin (1 g/lit), Copper oxychloride (2.5 g/lit)
(f) Cockchafer grubs
(a) 0.1 % Cypermethrin
(2) Cross-bred year - Leaf characteristics of one year age.
(3) Size -
(7) Rough /Smooth
(8) Leaf tip
(9) Basal leaf
(10) Leaf blade
(12) Horizontal cut
(14) Vertical cut
(c) ရွက်ညှာရင်းဖု -
(18) ဒုတိယရွက်ဖုံအနေအထား -
(19) Physical Characteristics
Characteristics of9years age
(20) ရွက်အုပ် -
(2) Shape -
(3) Color -
(4) Distinct -